Khubaradii UN-ka oo soo bandhigay baritaankoodii dilkii Jamal Khashogi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Khubaradii UN-ka oo soo bandhigay baritaankoodii dilkii Jamal Khashogi
June 20, 2019 - By: Maxamed Cismaan
Warbixinta baaritaankan soo socday bilihii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in ay jiraan cadeynmo muujinaya in amarka lagu dilay Suxufi Jamal Khashogi uu ka yimid hogaanka ugu sareeya ee boqortooyada Sacuudiga.
Guddiga Khabiirada ah ee Qaramada Midoobay u saartay baaritaankan oo ay hogaamineysay Ms. Agnes Callamard ayaa lixdii bilood ee lasoo dhaafay baareyay cododkii sirdoonka Turkida ka duubeen dilkii ka dhex dhacay Qunsuliyada Sacuudiga uu ku leeyahay Istanbul 2dii bishii Oktoober ee sanadkii hore.
“…Ragga dilka geystay ayaa cododkooda la maqlayaa iyagoo ka sheekaysanaya qaabka ay u dili doonaan Jamal Khashogi kahor intuusan imaan goobta uu dilka ka dhacay…” ayaa lagu yiri warbixinta oo sii faah faahisay inaysan waxna ka jirin dooda Dowlada Sacuudiga ee ah in si kama-ah uu u dhintay Khashogi xili sirdoonkooda ay su’aalo weydiinayeen.
Guddigan ayaa ku baaqay in baaritaan dhameystiran oo caalami ah lagu sameeyo dilkan iyo cidda bixisay amarkan oo ah hogaanka sare ee boqortooyada sacuudiga gaar ahaan Dhaxal-sugaha Maxamed bin Salman.
Go’aankan guddiga iyo warbixintan ayaa waxaa soo dhaweeyey dowlada Turkiga halka dowlada Sacuudiga ay ka hortimid.
Warbixintan ayaa la filayaa in loo gudbiyo golaha Xaquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay todobaadka soo socda.